I-Nevis Mango Festival ye-2020 isungula uMsitho oBonakalayo | Iindaba zeNkcubeko yokuHamba
Ikhaya » IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko » I-Nevis Mango Festival ye-2020 isungula uMnyhadala oBonakalayo
I-Nevis Mango Festival ye-2020 isungula uMnyhadala oBonakalayo
The Igunya lezoKhenketho laseNevis (NTA) Kuluvuyo ukukwazisa ukuba umnyhadala wonyaka we-Nevis Mango Festival 2020 uza kubanjwa endaweni yomnyhadala wesiqhelo esiqithini. Oku kungenxa yezithintelo zohambo kunye neenkqubo zempilo ezikhoyo ngoku, ngokusekwe kwimeko ye-COVID-19 ekhoyo.
Umnyhadala weMango olindelwe ngamehlo abonisa iindawo ezimbini zokuthengisa eziphambili zikaNevis: isithethe saso esikhethekileyo senkcubeko kunye neentlobo zayo ezingaphezu kwama-40 zemango zalapha. Ukuqaqanjelwa kwalo mnyhadala ngumceli mngeni wobuchule bokupheka apho abapheki kufuneka badibanise imango kwizifundo ezintathu ezitsha.
Umhla wokumiliselwa koMnyhadala nguMvulo, nge-22 kaJuni, ngokusebenzisa la maqonga amajelo eendaba alandelayo: I-Instagram (@nevisnaturally), Facebook (@nevisnaturally), iYouTube (nevisnaturally) kunye neTwitter (@Nevisnaturally).
Imibhiyozo ekwi-Intanethi iqala ngolwesiHlanu, nge-3 kaJulayi, ngomboniso we-Virtual Mango Tasting kuwo onke amaqonga eendaba ezentlalo nakwi-Nevis TV. Umboniso wevidiyo uyakwenziwa liCandelo loMphathiswa Wezolimo, libonisa iintlobo ngeentlobo zemango kwesi siqithi.
NgoMgqibelo, nge-4 kaJulayi, nge-10: 00 AM, kuyakubakho uMnyhadala weMango oBukhoma wokupheka eCleveland Gardens. Oku kuya kusasazwa kwi-Nevis TV kunye ne-NTA kumaqonga eendaba ezentlalo. Abapheki abathatha inxaxheba nguBerecia Stapleton kunye neWentworth Smithen. Baza kukhuphisana kwimijikelo emibini, umjikelo olungiselelwe kunye nengqokelela yemfihlakalo eyimfihlakalo, kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo zemango kwikhosi nganye.
Umnyhadala wokugqibela ngeCawa, nge-5 kaJulayi, uzakube nosaziwayo we-UK Iron Chef uJudy Joo. Umpheki oqeqeshiweyo waseKorea-waseMelika oqeqeshiweyo waseFrentshi kunye nomamkeli weNdawo yokutya rhoqo kunye neendwendwe ziya kubamba iKlasi eyiNgcaciso yeKharityhulam ebonisa izakhono zakhe ezintle zokupheka. Uya kudala iMango Tiramisu emnandi-eyona nto ilungileyo nangona iyinyani engeyiyo eyendalo yokuphatha i-dessert kwimpelaveki kaJulayi wesine!
Yijonge le Mango Extravaganza yokubonisa evela kuNevis - silandele kwi-Instagram (@nevisnaturally), Facebook (@nevisnaturally), YouTube (nevisnaturally) kunye ne-Twitter (@Nevisnaturally).
Iindaba ezingakumbi malunga neNevis.